Mpanjaka Kong Cash | Tsirom slot £ 5 + £ 500 FREE! Mpanjaka Kong Cash | Tsirom slot £ 5 + £ 500 FREE!
Mpanjaka Kong Cash dia slot lalao mifototra amin'ny foto-kevitry ny rajako goavana iray izay mitondra ny anaty ala toy ny mpanjaka. Maro ny sarimihetsika natao tamin'ny biby mahafinaritra io, fa misy tena mifototra amin'ny lalao vitsivitsy izany. ao amin'io billing finday slots lalao, misy dimy reels sy 20 paylines. The lalao ho ambony ny resahana ny ala maitso mavana amin'ny toeram-pambolena akondro matevina sy vato seza fiandrianana ho an'ny mpanjaka Kong. Izy mipetraka eo amin'ny satro-boninahitra eo an-dohany sy ny matory ankamaroan 'ny fotoana. Misy ala mikitroka gadona mozika mahafinaritra eo aoriana izay mitandrina ny fihetseham-po mavitrika. Afaka miloka amin'ny manomboka ilaina ny £ 0,20 dia hatsangako indray izy ny £ 500 isan-kofehy ireny.
Momba ny developer Mpanjaka Kong Cash
Mahafinaritra io lalao finday billing slots dia nanjary ny Blue Print. Izy ireo no mpitarika an-tserasera Casino lalao vahaolana Mpanome izay ilaina eto amin'izao tontolo izao. Manana traikefa manan-karena amin'ny fahaizana amin'ny lalao mandroso ny teknolojia izay manome fahafahana azy ireo hamorona lalao playable amin'ny finday fitaovana ihany koa.
Misy ny sasany sariitatra fomba tsara tarehy marika amin'ny finday io billing slots lalao. Misy ny voay, boloky, tigra sy ny rhinoceros miaraka amin'ny lalao avo ny famantarana maha-zava-dehibe fanehoana an'ohatra. Ny famantarana mandoa avo indrindra amin'ny 500 vola madinika tamin'ny mariky dimy landings. J, Q, K sy nitsinjaka A ny karatra no fanehoana an'ohatra ny ambany sokajy. Misy tombony roa fanehoana an'ohatra izay hanampy anao handresy amin'ny endri-javatra misy tombony fanampiny. Izy ireo no mariky ny mpanjaka Kong ny tenany miaraka amin'ny vola madinika volamena barika.
Wild Symbol: Ny hazo barika ny vola madinika volamena dia ny bibidia, ary mandrakotra endri-javatra ho an'ny rehetra ny sary famantarana hafa bar mpanjaka Kong. Dimy ny fivoaky ny marika eo amin'ny payline manome anao ny fandresena tsatòka ny hatramin'ny 500 fotoana koa.
Sleepy Kong: Kong ny mpanjaka matory amin'ny fotoana rehetra eo amin'ny vato seza fiandrianany. Tsapaka nandritra ny lalao, dia mifoha hanampy lafin-javatra sasany tombony ho an'ny slot mampiasa ny bazooka. Golden kofehy ireny barika, akondro tampon-tanety, tombony tosika sy ny kofehy ireny Streak no tombontsoa omeny.
Mpanjaka Kong ampielezo: Ny mariky ny mpanjaka Kong no aelezo endri-javatra io lalao finday billing slots. Telo na mihoatra ny famantarana io nandritra ny kofehy ireny mahatonga tombony haavon'ny. Afaka mandresy na dia iray ihany lafin-javatra efatra, ary izy ireo barika fipoahana, fanjakana maimaim-poana spins, lalana tombony maimaim-poana sy ny volamena spins.
famintinana: Izany no iray amin'ireo vitsy telefaonina billing slots mahery mifototra amin'ny rajako, mpanjaka Kong. Amin'ny sary an-tsaina sy ny tombony nitsoka endri-javatra, dia afaka mora foana be manantena ny ho tombony amin'ny faran'ny andro.
Bar Bar Black Ondry 5 Reel
Fanjakana be voninahitra